प्रमकी छोरी भन्नेले पुर्व प्रमको सालो नभन्ने ? « Sansar News
प्रमकी छोरी भन्नेले पुर्व प्रमको सालो नभन्ने ?
९ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०७:४६
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाइ प्रचण्डपुत्री मात्रै भन्ने हो भने काठमाण्डौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारलाइ पनि केपि शर्मा ओलीको सालो भनेर संबोधन गरौँ न त, किन विद्यासुन्दर शाक्य मात्रै भनिरहने ? प्रचण्डले छोरी मेयर उठाउँदा यत्रो हल्लीचल्ली हुन्छ भने केपि ओलीले मेयरमा सालो उठाउँदा चुइक्क नबोल्ने कस्तो एकलकाटे मनस्थिती हाम्रो ? ओलीले पनि सालो जिताउनकै लागि राप्रपासँग तालेमेल गरे, प्रचण्डले छोरी जिताउनको लागि काग्रेससँग तालमेल गरे , काग्रेसले आफ्नो पकडमा मत ल्याउन माओवादीसँग तालमेल गर्र्यो ।
केपि ओलीले आफ्नै सालो भएपनि विवाद मत्थर पार्नको लागि सालो मात्र हो भन्न सक्लान । तर रगतको नाता फेर्न त सकिदैन पक्कै पनि । न त प्रचण्डले रेणुलाइ छोरी होइन भन्न सक्छन न त रेणुले प्रचण्डलाइ आफ्नो बुवा होइन भन्न सक्छिन । बाऊ छोरी हुन सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो तर यतिविधि आलोचना गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्दैन । परिणामले देखाइहाल्ने कुरा हो, एकदमै तल्लो स्तरमा उनिमाथि आक्षेप लगाइनु दुखद पक्ष हो । अधिकारका कुरा गर्ने अधिकारकर्मी एउटी महिलामाथि यस्ता सम्म लान्छना लगाउँदा समेत रमिते बन्नुले उनिहरुको हैसियत पनि छर्लगै देखियो ।
रगतको नाता फेर्न त सकिदैन पक्कै पनि । न त प्रचण्डले रेणुलाइ छोरी होइन भन्न सक्छन न त रेणुले प्रचण्डलाइ आफ्नो बुवा होइन भन्न सक्छिन । बाऊ छोरी हुन सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो तर यतिविधि आलोचना गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्दैन । परिणामले देखाइहाल्ने कुरा हो, एकदमै तल्लो स्तरमा उनिमाथि आक्षेप लगाइनु दुखद पक्ष हो ।
रेखा थापाले २०७० सालमा माओवादीमा प्रवेश गरेर माओवादी डुबाएको र हाल राप्रपामा छिरेर राप्रपा पतासाप भएको आरोप लगाइएको छ । एकजना रेखाको यत्रो पार्टी कायापलट गर्न सक्ने तागत छ होला र ? रेखा थापाले स्वयम यस्ता आरोपको बारेमा केही बताएकी छैनन । रन्जु दर्शनालाइ एमालेको एक्स उम्मेदवारको रुपमा उभ्याइएको छ । एमालेको सिफारिसमा युरोपियन युनियनले अरर्बो रकम सहयोग गरेको आरोप लगाइयो यसको खण्डन स्वयम रन्जुको दलले गरेको छैन । भोट हाल्दा जवान थिएँ मत गन्दागन्दै बुढी भए म भन्दै रन्जु दर्शनाका दुइथरी तस्बिर सार्वजनिक भए । एउटा तस्बिरमा भर्खरकी रन्जु अर्को तस्बिरमा बुढी भएकी रन्जुको तस्बिर थियो । आखिर रन्जुकै तस्बिर किन रोजियो होला ?
अरुको आत्मसम्मानमा चोट पुराउँदा आफ्नो आत्मलाइ पनि ख्याल गर्न जानौँ । आज रेणु दाहाललाइ हामीले लगाउने आरोप, आक्षेप हाम्रा आफ्नै नारी आफन्तको नाममा लगाइएको भए हामी के सोच्थ्यौँ होला ? एकपटक मानवियताको नजरबाट हेरौँ ।
यसर्थ, रेणु दाहाल मात्र पहिलो पात्र भएको भए भन्न सुहाउँथ्यो तर अरुको बारेमा नबोल्ने एउटै व्यक्तिको खोइरो जतिबेलापनि खन्ने काम बन्द गरौँ । सुजाता कोइरालाको नाम गिरिजापुत्री, शंशाक कोइरालाको नाम बिपिपुत्र, उमेश श्रेष्ठको नाम पुष्पलाल पुत्र किन नराख्ने त ? यि पात्र त आफ्नै नामले चिनिएका छन नि, रेणु दाहाल र उनि जस्ता अन्य नारीहरु हाम्रै आफ्नै दिदी बहिनी, आमा, भाउजु, काकी माइजु, बुहारी पक्कै हुन । अरुको आत्मसम्मानमा चोट पुराउँदा आफ्नो आत्मलाइ पनि ख्याल गर्न जानौँ । आज रेणु दाहाललाइ हामीले लगाउने आरोप, आक्षेप हाम्रा आफ्नै नारी आफन्तको नाममा लगाइएको भए हामी के सोच्थ्यौँ होला ? एकपटक मानवियताको नजरबाट हेरौँ । आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक दलहरु जे गर्न तयार छन, पाएसम्म गरेकै छन सबैको एकमुष्ट बिरोध गरौँ न गर्नैपर्ने हो भने व्यक्तिविशेषमाथि अरिंगाल खनिएजसरी खनिने काम हामी जत्तिको सचेत नागरिकले नगरौँ । म कुनै पाटीसँग आवद्ध छैन , मनमा लागेको कुरामात्र पोखेको हो